Nanapa-kevitra Manokana Ny Hanohitra Ny Fanavakavahana Ara-poko Ny Tompon’ny Fandraharahana Iray Ao Singapaoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2016 7:14 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Italiano, Deutsch, Español, English
Nanoratra i Darius Cheung, mpanorina ny tranonkala mandahatra filazana fananan-trano 99.co, tamin'ny fomba nikarohany trano nahatonga azy hahatsapa ny fihanaky ny fanavakavahana ao Singapaoro. Mitantara ny fomba tsy niraharahian'ireo mpanera sy ireo tompon-trano sasany nifandray taminy izy rehefa nandre ireo fa avy any India ny vadiny izay bevohoka .
Nanambady an'ilay Indiana-Singaporeana Roshni Mahtani, mpandraharaha iray izay nanorina ny tranonkala fitaizana theAsianparent, izy, .
Manana mponina teratany samihafa i Singapaoro ary mirehareha amin'ny fananana governemanta izay mampiroborobo ny firindrana ara-poko. Na izany aza, nihamafy ny fihenjanana ara-poko tato anatin'ny taona vitsy, izay nomen'ny vondrona ultranationalist sasany tsiny tamin'ny fahatongavan'ny ny mpiasa vahiny.
Miahiahy momba ny hoavin'ny zanany i Darius ary nivoady hiady amin'ny fanavakavahana ara-poko . Namoaka fomba fiasa vaovao ny orinasany ao amin'ny tranonkala antsoina hoe “Tonga soa ny firazanana rehetra “, izay manome ireo mpanera sy ny tompon-trano fandrisihana raha maneho fa misokatra ho an'ny rehetra ny filazana fanofana “na inona na inona firazanana” :
Manantena i Darius fa hanome aingam-panahy bebe kokoa ho an'ireo olona mba haka antoka manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra ny fanentanana nataony.
Nandray ny dingana voalohany nataon'ny orinasan'i Darius ny mpanoratra, mpikatroka sady mpiara-miasa ato amin'ny Global Voices Kirsten Han . Nampahatsiahiviny ihany koa ireo mpandray fanapahan-kevitra ara-politika fa ilaina ny lalàna miady amin'ny fanavakavahana amin'ny ankapobeny: